Ciidanka DF oo nolosha ku qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab + Sawirro - Caasimada Online
Home Warar Ciidanka DF oo nolosha ku qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab + Sawirro
Ciidanka DF oo nolosha ku qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab + Sawirro
Baydhabo (Caasimada Online) – Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo kaashanaya kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa howl-gallo ka dhan ah dagaalyahanada Al-Shabaab ka sameeyey gobolka Baay, iyada oo laga helayo faah faahino dheeraad ah.
Howl-gallada oo ahaa kuwa qorsheysan ayaa si gaar ah ciidamadu waxa ay uga fuliyeen deegaanka Awdiinle ee gobolkaasi, iyada oo lagu beegsaday xubno ka tirsan Shabaab.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Xoogga dalka ayaa shaaca ka qaaday in howl-gallada lagu soo qabtay in illaa afar xubnood oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab.
‘Maleeshiyada la soo qabtay ayaa gaaraya 4-ruux, kuwaas oo dhibaato xooggan ku hayay dadka deegaanka Awdiinle iyo tuulooyinka hoos yimaada,” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo lagu daabacay wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee magaceeda loo soo gaabiyo Sonna.
Sidoo kale qoraalka ayaa intaasi kusii daray “Ciidanka oo helay xogta maleeshiyadan ayaa ku baxay, kadibna gacanta ku soo dhigay,”.
Ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa weli haq-dhaqaaqyo ka wada duleedka magaalada Baydhabo.
Al-Shabaab ayaa haatan ku xoogan gobollada Baay iyo Bakool, iyaga oo ka fuliyo weeraro ka dhan ah ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMSIOM.